အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၂၀ ( Union Square, West Field & M.Y. China / Yan can cook ) ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၂၀ ( Union Square, West Field & M.Y. China / Yan can cook ) ။	4
Posted by Foreign Resident on Mar 23, 2016 in Travel |4comments
The Alcatraz အကျဉ်းထောင် Tour ပြီးတဲ့အခါ ၊
ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ Cable Car နှင့် ဟော်တယ်ဘက်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒါနှင့် ပြောရဦးမယ် ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ Cable Car / Tram တွေရှိပေမယ့် ၊ Type က တစ်မျိုးထဲပါ ။
San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ် ။ San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ် 1 ။
20. San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ် 1 ။
San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ်2။
20. San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ်2။
San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ်3။
20. San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ်3။
San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ်4။
20. San Francisco ရောက်မှဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပုံစံမျိုးစုံ တွေ့ရတော့တယ်4။
ဟော်တယ်ဘက်ကို ပြန်လာပေမယ့် ၊ ဟော်တယ်မှာ ပြန်နားဘို့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဟော်တယ် နားက San Francisco ရဲ့ အကြီးဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး လို့ ၊
နာမည်ကြီးတဲ့ West Field Sanfrancisco မှာ ဈေးဝယ်ပြီး ညစာစားဖို့ပါ ။
San Francisco ရဲ့ အကြီးဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး West Field San francisco 1 ။
20. San Francisco ရဲ့ အကြီးဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး West Field San francisco 1 ။
San Francisco ရဲ့ အကြီးဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး West Field San francisco2။
20. San Francisco ရဲ့ အကြီးဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး West Field San francisco2။
နက်ဖြန် သြဇီ ပြန်ရတော့မှာမို့ ဈေးကတော့ သိပ်မဝယ်ဖြစ်ပါဘူး ။
ရှိရှိသမျှ အိတ်တွေကလည်း ပြည့်နေပြီလေ ။ ရှိတာတောင် မနဲသယ်ရမှာ ။
အဲ့ဒဟာ နှင့် ညစာ ထမင်းစားချိန် ရောက်လာတော့တယ် ။
အောင်မယ် West Field က သူ့ Restaurant တွေကို ၊
Restaurant Collection ဆိုပြီးကို သေချာ ညွှန်းထားသဗျ ။
West Field က Restaurant Collection ဆိုပြီးကို သေချာ ညွှန်းထားသဗျ ။
20. West Field က Restaurant Collection ဆိုပြီးကို သေချာ ညွှန်းထားသဗျ ။
အဲ့ဒီ Restaurant Collection ကို သေချာကြည့်မိတော့ ၊
ရှေ့ဆုံးက M.Y. CHINA ဆိုင် ကြော်ငြာထဲက တရုတ်ကြီး ငါမြင်ဘူးပါတယ်ဆို ။
လား လား ၊ မြန်မာပြည်က ” Yan Can Cook ” TV စီးရီး မှာလာသွားတဲ့ ၊ နာမည်ကျော် စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ဖြစ်နေပါလေရော ။
စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ ဟင်းချက်နည်း မြန်မာ ဘာသာပြန်တောင် ရှိသေး ။ မြန်မာပြည်က ” Yan Can Cook ” TV စီးရီး က စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ။
20. မြန်မာပြည်က ” Yan Can Cook ” TV စီးရီး က စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ။
စားဖိုမှူးကြီး Martin Yan ရဲ့ ဟင်းချက်နည်း မြန်မာ ဘာသာပြန်တောင် ရှိသေး ။
20. စားဖိုမှူးကြီး Martin Yan ရဲ့ ဟင်းချက်နည်း မြန်မာ ဘာသာပြန်တောင် ရှိသေး ။
ဒါနှင့်ဘဲ ၊ ဒီလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြုံရခဲတယ်လေ ဆိုပြီး ၊
စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ M.Y. CHINA ဆိုင် မှာဘဲ စားလိုက်တယ်လေ ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ၊ ဈေးသင့်ပြီး ၊ တော်တော် စားကောင်းသားဗျ ။
စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ M.Y. CHINA ဆိုင် ။
20. စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ M.Y. CHINA ဆိုင် ။
စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” M.Y. CHINA ဆိုင် ရဲ့ Menu ။
20. စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” M.Y. CHINA ဆိုင် ရဲ့ Menu ။
ဈေးသင့်ပြီး ၊ တော်တော် စားကောင်းသားဗျ ။
20. ဈေးသင့်ပြီး ၊ တော်တော် စားကောင်းသားဗျ ။
၁၅ – ဝ၅ – ၂၀၁၄ ။
ဒီနေ့ကတော့ ၊ ညနေ သြဇီ ပြန်ဖို့ လေဆိပ်ဆင်းရမှာမို့ ၊
နီးနီး နားနား က Civic Square ကိုဘဲ လှည့်ပါတ်ကြည့်ကြပါတယ် ။
Civic Square ဆိုတာလဲ San Francisco ရဲ့ နာမည်ကြီး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊
ဘေးနား ပါတ်ပါတ်လည်မှာ Shopping Mall တွေ ဝန်းရံနေတာပါ ။
မဟေသီကတော့ မမောနိုင် မပန်းနိုင် Macy’s ကုန်တိုက်ကြီးထဲ ဝင်သွားသဗျ ။
အဘ ကတော့ ခြေတွေလဲ ညောင်းနေ ၊ စိတ်လဲ မဝင်စားလှတာမို့ ၊
Civic Square ပန်းခြံထဲမှာဘဲ အေးအေးလူလူ ထိုင်စောင့်နေတော့တယ် ။
20. Civic Square ပန်းခြံထဲမှာဘဲ အေးအေးလူလူ ထိုင်စောင့်နေတော့တယ် ။
Civic Square ပန်းခြံဘေးက Macy’s ကုန်တိုက် ။
20. Civic Square ပန်းခြံဘေးက Macy’s ကုန်တိုက် ။
အမေရိကန်မှာကလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ သပိတ်တွေ အတော်ရှိပုံဘဲ ။
Macy’s ကုန်တိုက် ရှေ့မှာကော ၊ Swarovski ဆိုင် ရှေ့မှာကော ၊
ဒီ ဆိုင်ရှင် နှင့် အလုပ်သမား ပြသာနာတက်နေကြောင်း နှင့် ၊
ဒီ ဆိုင် မကောင်းကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဗီနိုင်းကြီးက ပြူးလို့ ။
ဈေးဝယ်တဲ့သူတွေကတော့ သိပ်ဂရုစိုက်ပုံ မရှိပါဘူး ၊ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ပါဘဲ ။
Swarovski ဆိုင် ရှေ့မှာ အလုပ်သမား ပြသာနာ ဗီနိုင်းကြီးက ပြူးလို့ ။
20. Swarovski ဆိုင် ရှေ့မှာ အလုပ်သမား ပြသာနာ ဗီနိုင်းကြီးက ပြူးလို့ ။
Macy’s ကုန်တိုက် ရှေ့မှာ အလုပ်သမား ပြသာနာ ဗီနိုင်းကြီးက ပြူးလို့ ။
20. Macy’s ကုန်တိုက် ရှေ့မှာ အလုပ်သမား ပြသာနာ ဗီနိုင်းကြီးက ပြူးလို့ ။
စိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ကတော့ ဖိနပ်ကို အနီတစ်ဖက် အစိမ်းတစ်ဖက် စီးပြီး ၊
အင်္ကျီကိုယ်ကျွတ် နှင့် ရှေ့က ဖြတ်သွားသမျှ ကားတွေကို အလေးပြုနေလေရဲ့ ။
မတော် ကိုယ့်ဘက်လှည့်လာမစိုးလို့ ၊ ဓါတ်ပုံတောင် ခိုးရိုက်ရတယ် ။
ဖိနပ်ကို အနီတစ်ဖက် အစိမ်းတစ်ဖက်စီးပြီး ကားတွေကို အလေးပြုနေလေရဲ့ ။
20. ဖိနပ်ကို အနီတစ်ဖက် အစိမ်းတစ်ဖက်စီးပြီး ကားတွေကို အလေးပြုနေလေရဲ့ ။
ဒါနှင့်ဘဲ နေ့လည်စာစားချိန် ရောက်တော့ ၊
ဈေးလဲသင့် ခံတွင်းလဲတွေ့တဲ့ M.Y. CHINA ဆိုင် မှာဘဲ ပြန်စားကြတယ်လေ ။
ဒီတစ်ခါတော့ မနေ့ကနှင့်မတူအောင် ဟင်းပြောင်းမှာကြသပေါ့ ။ စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ နာမည်ကျော် ခေါက်ဆွဲကတော့ မပါမဖြစ်ပေါ့ ။
ဆိုင်ထဲမှာလဲ အဲ့ဒီ နာမည်ကျော် ခေါက်ဆွဲ ကို လုပ်နေပုံ ကြည့်လို့ရတယ်လေ ။
စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ M.Y. CHINA ဆိုင်ထဲမှာ ။
20. စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ M.Y. CHINA ဆိုင်ထဲမှာ ။
ဒီတစ်ခါတော့ မနေ့ကနှင့်မတူအောင် ဟင်းပြောင်းမှာကြသပေါ့ ။
20. ဒီတစ်ခါတော့ မနေ့ကနှင့်မတူအောင် ဟင်းပြောင်းမှာကြသပေါ့ ။
စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ နာမည်ကျော် ခေါက်ဆွဲ လုပ်နေပုံ ။
20. စားဖိုမှူးကြီး ” Martin Yan ” ရဲ့ နာမည်ကျော် ခေါက်ဆွဲ လုပ်နေပုံ ။
စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ၊ ဟော်တယ်ပြန် ၊ ပစ္စည်းတွေ သိမ်း ၊
၂ ရက်လုံး ခွင့်ယူ လိုက်ပြပေးတဲ့ မဟေသီ့ သူငယ်ချင်းကို နှုတ်ဆက်ပြီး ၊
ဆစ်ဒနီ ကို ပြန်ဖို့ ၊ လေဆိပ်ကို ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။
San Francisco ကနေ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ မှာ စထွက်လာခဲ့ပေမယ့် ၊
လမ်းမှာ Date Line ကို ပြောင်းပြန် ဖြတ်ရပေသမို့ တစ်ရက်ပိုပြီး ၊
၁၇ ရက်နေ့ မှာမှ Home Sweet Home ဆစ်ဒနီကို ပြန်ရောက်ပါတော့တယ် ။
ဒီမှာတင် အဘ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား တောလားလေး အဆုံးသတ်ပါပြီကွယ် ။
အားပေး ဖတ်ရှုကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ် ။
တစ်ခုပြောချင်တာက အရင်တစ်ခေတ်တုန်းက ၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Cable Car / Tram ဆိုတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ ။ 20. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Cable Car / Tram ဆိုတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ ။
20. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Cable Car Tram ဆိုတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ ။
ခင်ဇော် says: ခုလည်း မြန်မာပြည်မှာ ကေဘယ်ကား စမယ်ဆိုလားလို့။
ရန်ကန်ကွတ် အစီအစဉ်က ကျနော့ရဲ့ ပထမဆုံးသော ကြည့်ဖူးတဲ့ဟင်းချက် အစီအစဉ်ပါ။
အာဝဇမ်း ရွှင်တယ် ပြေါရမလားး ချစ်မွှေးပါလို့ သူသင်ရင် မှတ်မိနေတာ။
သူ့ဆိုင်မှာ စားခဲ့ရတာကို အားကျသဗျာ။
ခေါက်ဆွဲလုပ်တာ တော့ မြင်ရဖို့ လွယ်တယ်။ ဒီမှာ။
Swarovski က ဖန်စီ (လို့ပဲပြေါမပေါ့) သူ့ က အစစ်ထက်တောင် ဈေးကြီးသဗျာ။
အမှန်က သူ့ ဘရန်းနိမ်းတတ်ထားတဲ့ သလင်းတွေ ပါ ဗျာ။ ဂစ်ဂစ်။
လက်ရာနဲ့ ဒီ ဇိုင်းကောင်းတော့ လည်း ကဘာကျော်ပေတာပေါ့။
kai says: ကြက်ကုန်းဘောင်ကို.. ၁၆ဒေါ်လှ၊ ၀က်နံရိုး ၁၈ဒေါ်လှ…ကတော့.. တော်တော်များသဗျ..။
LAမျက်စိနဲ့ဆိုရင်တော့.. တော်တော် ဈေးကြီးတဲ့ Chineseဆိုင်.။
မစားရေးချ.. မစား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: US မှာ . . . ဆန္ဒပြပွဲ လုပ်သူတွေ. . .
ဆန္ဒပြခွင့် အစိုးရကို တောင်းရလား
ခွင့်ပြုမှ ပြရတာလား. . .
ခွင့်မပြုပဲ ပြရင် မြန်မာပြည်လို အဖမ်းခံရလား သိချင်မိ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အော်ရယ်.. ခုမှ သေချာကြည့်ပါမယ်ဆိုမှ ဇာတ်သိမ်းခန်းနဲ့ တိုးနေတယ်…
PDF ထွက်ရင်ပြောပါအူး အဘ…